Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere mmiri mmiri na matraasi | Rayson
Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere mmiri mmiri na matraasi
Ndị na-abanye panthers ji ohere nke loopholes na Ndezigharị nke abụọ na United States. S. Iwu nke na-eme ka ọ bụrụ iwu ka ọ na-eyi egbe na-adịghị mma. Uwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ihe si na otu ndị mmadụ na-arụkọ ọrụ iji bulie nchegbu banyere nsogbu mmekọrịta. Ha na-eme ya site na ijiji na ụdịkọtara.
Ọ na-ewe nkeji iri tupu ọgwụ ahụ adịla njikere. Iji malite ịta ọgwụ, pịa ọgwụ maka nke abụọ. Ọgwụ ọgwụgwọ ga-amalite na ogbako. Mgbe a na-emeso ọgwụ gị, ndị ọrịa na-agaghị adị n'ime nkeji iri. Iji hụ oge ole ka fọdụrụ tupu ọgwụ adịchaala dị njikere, naanị metụ ọgwụ ike ọzọ.
Ikuku ochie ma ọ bụ nke rụrụ arụ nwere ike ibute nsogbu ahụike dịka nsogbu iku ume ma mụbaa oyi n'oge. Ọ bụrụ na ụlọ gị bụ ebu, ọ nwekwara ike ibute ọrịa siri ike. Nzọụkwụ mbụ iji hichaa ikuku dị ọcha na-asachapụ ikuku ikuku. Nke a ga - ewepụ ihe irighiri ihe ọ bụla ma ọ bụ ebu ma jide n'aka na ikuku gị ma ọ bụ igwe mkpuchi ikuku dị ọcha.